विचित्र संसार Archives - Citypokhara
गजबको अफर: अब भाडामा गर्लफ्रेण्ड, त्यो पनि २२ रुपैयाँमा छानी-छानी !
२०७६ आषाढ १८ , बुधवार by Citypokhara.com
एजेन्सी । बेलाबखत निकै अचम्म लाग्ने र अपत्यारिला समाचार सार्वजनिक भएको छ । घटना हो– छिमेकी मुलुक चीनको । जहाँ एक सपिङ्ग मलले ग्राहकहरुलाई भाडामा ग्रर्लफ्रेण्ड उपलब्ध गराइदिन्छ । यदि तपाईँले एउटा सर्त मान्नु भयो भने ती केटीहरुसँग २० मिनट समय बिताउन सक्नुुहुन्छ । �
अनुहार चम्किलो बनाउन कुकुरको मुत्र सेवन!(भिडियो सहित)
२०७५ भाद्र १५ , शुक्रबार by Citypokhara.com
एजेन्सी। हिन्दु धर्म अनुसार गाईको मुत्रलाई गहुँत भन्दै खाने चलन चलिरहेको छ ।हाम्रो समाजमा रक्सी धेरै खाएर घर जादा प्राय सबैले गालीको रुपमा प्रयोग गर्ने वाक्य रहने गर्छ कि ‘कुकुरको मुत खाएर आईस’ तर संसारमा त्यस्ता पनि ठाँउहरु छन जहाँ कुकुरको मुत्रपान समेत गर्न था�
बिरामीको पेटबाट निस्कियो स्टिलको गिलास, डाक्टर तीनछक !
२०७४ मंसिर् १५ , शुक्रबार by Citypokhara.com
बिरामीको पेटबाट स्टिलको गिलास निस्किएको घटनाबाट स्वयं डाक्टर मात्र होइन आफन्तजन र घटना सुन्नेहरु समेत तीनछक परेका छन् । घटना छिमेकी मुलुक भारतको मध्य प्रदेशस्थित सतनाको हो । त्यहाँका एक ५५ वर्षीय पुरुषको पेटबाट स्टिलको गिलास डाक्टरहरुले निकालेका छन् । सतनास्थ�
१० महिने बच्चाको वजन २८ किलो ! (फोटोफिचर)
२०७४ कार्तिक २९ , बुधवार November 15, 2017 by Citypokhara.com
जन्मेको ९ महिना उमेर पुगेको बच्चाको तौल कति होला ? करीब १० किलो । तर मेक्सिकोमा भने एउटा बच्चा १० महिनाको हुँदा नै ९ वर्षको जत्तिकै वजनदार रहेको छ । मेक्सिकोको कोलिमा भन्ने ठाउँमा बस्ने लुइस मेनुअल गोन्जालेज नामक बच्चाको तौल २८ किलो रहेको छ । अस्वभाविक तौलका कारण बच�
कस्तो कानून ? बच्चाले फेसबुक चलाउँदा बावु–आमाको जागिर चट् !
२०७४ कार्तिक २४ , शुक्रबार by Citypokhara.com
बेलायतको हाउ अफ लर्डस्मा यस हप्ता १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फेसबुक तथा ट्वीटर चलाउन रोक लगाउने विषय पनि बहसमा सामेल गरियो । बालबालिकालाई निश्चित उमेरपछि मात्र सोसल मिडियामा अनुमति दिने विषयलाई डाटा सुरक्षण अध्यादेशमा सामेल गर्ने विषय बहसमा आयो । यो कानूनबाट स�
यि हुन् प्राईभेट जेटमा यात्रा गर्ने १६ बर्षे अर्बपति यूवा, विज खलिफा देखी सलमान खान सम्म साथी !!
२०७४ कार्तिक २० , सोमबार by Citypokhara.com
एजेन्सी । सायद यो कुरा सुनेर तपाईलाइ आश्चर्य लाग्ला कि मात्र १६ बर्ष पुगेका यूवाको यस्तो मस्ति ?? हो, राशिद बेल्हासा संसारकै धनि बच्चाहरु मध्य एक हुन् । उनी आफ्नै जेटमा चढेर लामो यात्रा गर्छन भने छोटो यात्रा फरारी कारमा गर्ने गर्छन् । मनि किक्सको उपनामले चिनिने उनी द�
यी हुन् ३६ सन्तानका बाउ, ३७ औँ बच्चाको पर्खाइमा (भिडियोसहित)
२०७४ कार्तिक १६ , बिहीवार November 2, 2017 by Citypokhara.com
यो जमानामा एकदुई जना सन्तान हुर्काउन त गाह्रो हुन्छ । तर यहाँ ३६ जना बच्चा पालन पोषण गर्ने मर्द बाउहरु पनि रहेछन् । यी मर्द तीन दर्जनका बाउ बनिसके । अझ केही समयपछि नै थप एक बच्चा पाउनेवाला छन् । गुलजार खान नामक एक पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छाइरहने गरेका छन् । पा
बाथरुममा मोवाईल चलाएर युवाहरु के गर्छन ?
२०७४ कार्तिक १५ , बुधवार November 1, 2017 by Citypokhara.com
आजको जमानामा मोबाइल फोनविनाको जीवन अधुरो नै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । खाली समय मिल्यो कि गोजीबाट मोबाइल फोन निकालेर इन्टरनेट खोलिहाल्छौँ हामी । सायद मानिसले मोबाइल फोन नचलाउने त्यस्तो कुनै ठाउँ नै छैन, चाहे त्यो शौचालय होस् वा �
पत्याउनुहुन्छ ? ६५ हजार भन्दा धेरै ‘भूत’ले पाए पेन्सन
२०७४ कार्तिक १४ , मंगलवार by Citypokhara.com
एजेन्सी । फिल्ममा डरलाग्दो भूतले विभिन्न डरलाग्दा काम गरेको देखिन्छ । तर यथार्थमा चाहिँ भूतले पेन्सन थाप्दोरहेछ भन्ने समाचार सुन्नमा आएको छ । यो घटना हाम्रै छिमेकी देश भारतको हो । भारतको पञ्जाबमा ६५ हजारभन्दा धेरै भूतले पेन्सन पाइरहेका छन् । समाचार अनुसार, पञ्जा
९ वर्षकी बालिकाको गर्धन १ सय ८० डिग्रीले बांगो ! कसरी यस्तो भयो ?
२०७४ कार्तिक १३ , सोमबार by Citypokhara.com
९ वर्षकी बालिका, जसको गर्धन बांगो छ र गर्धन बांगो भएकै कारण टाउको १८० डिग्रीमा तेर्सो परेर रहेको छ । देख्दैमा अत्यासलाग्दो ती बालिकाको रुप देखेर कतिले उनलाई भुतप्रेत भन्छन् त कतिले मांशपेशीको रोग । पाकिस्तानको सिन्ध प्राप्तमा बस्ने ९ वर्षकी अफसिन कोम्बारको गर्धन